एनआरएन यूके निर्वाचनको लागि मतदान हुंदै
बिहान ८ बजेदेखि अहिले बेलायतका विभिन्न क्षेत्रस्थित ११ वटा बुथमा मतदान भइरहेको छ । स्कट्ल्यान्डका ग्लास्गो र एडिनबरामा निर्वाचन सामग्री समयमा नपुगेका कारण मतदान सुरु हुन ढिलाई भएको छ । विस्तृतमा
पुनमको शालिन क्याम्पियन : मतदातालाई अपील, प्रतिस्पर्धीलाई धन्यवाद (भिडियो)
अाइसिसी सदस्यमा पाका र अनुभवी तिम्सिनाको चर्चा
बेलायतमा डिग्री गर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई २ वर्षे वर्क पर्मिट, सेफ ल्याउन पनि सहज
यी हुन् एनआरएन यूके निर्वाचनका लागि १३ वटा बुथ
बोरिस फेरि पनि असफल
टोटनहम हिरो ‘ह्यारी केन’ !
एजेन्सी । पछिल्लो केही वर्षयता प्रिमियर लिग क्लब युरोपको प्रतिष्ठित क्लबमा गनिन थालेको छ । यस स्थानमा पुर्याउन प्रशिक्षक मोरिसिनो पोचितिनोको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ ।
लण्डन आक्रमणमा संलग्नमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ: ट्रम्प
वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार बेलायती संसदबाहिर गराइएको शङ्कास्पद आतङ्कवादी आक्रमणमा सम्लग्न ‘व्यक्तिहरू’ लाई हदैसम्म कडा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।
लण्डनको संसद भवनबाहिर पैदल यात्रुमाथि कार कुदाउने 'आतंकवादी'
बिहान करिब साढे ७ बजे एक व्यक्तिले सडकमा कुदाइरहेको कार अचानक सडक छेउका साइकलयात्री र फुटपाथका पैदलयात्रीमाथि जोतेका थिए ।
मोना यूकेले बेलायतका नेपाली खेलाडीमाझ सर्वाधिक पुरस्कारको भलिबल आयोजना गर्ने
पहिलो मोना यूके कप भलिबल प्रतियोगिता आउंदो सेप्टेम्बर ८ तारिखका दिन अल्डरसटको एल्डरवुड लिजर सेन्टरमा खेलाइने भएको हो । प्रतियोगितामा पुरुष तथा महिला टोलीहरुबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।
लण्डन दूतावासमा साहित्यिक स्रष्टाहरुलाई सम्मान
लण्डन । बेलायतको भ्रमणमा आएका साहित्यिक व्यक्तित्वहरुलाई लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले सम्मान गरेको छ ।
आयरल्याण्डमा स्व. ईशान प्रसाईको स्मृतिमा सांगीतिक सांझ
डब्लिन । आयरल्याण्डको डब्लिनमा आयोजित ईशान प्रसाईं मेमोरियल सांझ भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । ९७७ क्रु र ईशान प्रसाईं मेमोरियल ट्रस्टको संयुक्त आयोजनामा उक्त सांगीतिक सांझ आयोजना गरिएको थियो ।
गोर्खा विधवाकी ५२ वर्षीया छोरीका पक्षमा बेलायती अदालतको फैसला
उच्च अदालतले बेलायतमै रहेकी गोर्खा विधवाकी नेपालस्थित ५२ वर्षीया छोरी तारादेवी पुनका पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
बेलायती संसद् भवन अगाडि कार दुर्घटना, पैदलयात्री घाइते
लन्डन । बेलायतको संसद् भवन अगाडि एकजना सवारी चालकले जानाजान पैदलयात्री र साइकलयात्रीलाई लक्षित गरी पैदलमार्गमा दुर्घटना गराएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
ग्रेटर रशमोर नेपाली कम्युनिटीको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । अल्डरसटको भेटघाट रेष्टुरेन्टमा आइतबार साधारणसभा सम्पन्न भएको हो ।